Yakanakisa Kushambadzira Mureza-Angled Kugadzira uye Fekitori | Jesson Mureza Arts & Crafts
Ratidza nemireza inokwezva ekuratidzira! Rudzi urwu rwekuratidzira mureza ndeimwe yeanonyanya kushambadza maturusi, aine makuru ekudhinda masaizi, ako ese kushambadzira mameseji anogona kunyatso kudhindwa uye nenzira kwayo kuendesa. Uyezve, iwo angled ekuratidzira mireza anouya nemhando dzakasiyana dzemidziyo kuti iwe usarudze kubva
Kukwezva Zvimwe Zvakatarirwa neCustom Angled Kushambadzira Mireza
Ita kuti misoro itendeuke uye vanhu vafambe kuenda kubhizinesi rako kana chiitiko chine dhizaini uye inokwezva tsika yakadhindwa yekuzivisa mireza. Aya asingaremi asi akasimba angled ekushambadzira mireza akagadzirwa neyako logo, kushambadzira, kana chiitiko chiitiko chakadhindwa pamucheka wakaita semisodzi. Iyi yakasarudzika dhizaini inobvumira yako kushambadzira uye yekushambadzira mifananidzo kumira kunze kubva kune echinyakare kushambadzira mireza, ichigonesa iwe kukwezva kwakawanda kutarisisa uye kuwana zvimwe zvakawanda zvekusimudzira mabhenefiti.
Dhinda Pfungwa Yako paMicheka Inogara
Semutengesi wezvigadzirwa zvakadhindwa, tinopa sarudzo yemasevhisi etsika, kubva pamifananidzo, saizi yechigadzirwa kusvika kumachira. Nekupa yakasarudzika machira emicheka, tinokutendera iwe kuti uwane iwo akakodzera machira zvinoenderana nebhajeti rako uye zvido.
110g Yakarukwa Polyester
130g Shiny Yakarukwa Polyester
115g Fluorescent Polyester (Yero uye Orange)
Yemhando Yekushambadzira Mireza Yakakwana yechero Yekusimudzira Zviitiko
Iyo yakasarudzika dhizaini yeminhenga mireza inoita kuti ive yakakwana kune chero zviitiko zvekushambadzira kana zviitiko. Tsika dzakadhindwa dzekushambadzira mireza inowanikwa mumatanhatu matatu akasiyana aine akapetwa mabhesheni kuitira kuti kushambadzira mireza kumire pachavo mukati meimba. Izvo zvakare zvinowanikwa nedanda repasi painoiswa kunze sezvinhu zvine simba, zvichivabvumidza kuti vamire vachipesana nemamiriro ekunze akashata semhepo nemvura. Iyi minhenga inoshambadza mireza inotakurika uye nyore kumisikidza sezvavanogona kumiswa mumaminetsi.
Minhenga Mireza Yemarudzi Akasiyana uye Akasiyana Ekuratidza Saizi
Yedu standard uye deluxe mhando dzakasiyana mune izvo zvinhu zvepole set. Yerudzi rwemhando, iyo danda inogadzirwa nealuminium nepo iyo deluxe iri fiberglass. Zvakare isu tinopa yakasarudzika minhenga mireza yemasikisi akasiyana kuti akwane zvaunoda.
Mubvunzo: Unogona here kugadzirisa saizi yekuratidzira mireza?
A: Isu tinopa anopfuura makumi mashanu ekuratidzira mureza matemplate aunosarudza kubva. Kana isu titumire iwo chaiwo masikisi ehurdware, isu tinogona zvakare kugadzira iyo yakasarudzika yekuratidzira mureza kuti ikwane iyo.
Mubvunzo: Unogona kuita opaque kuratidza mureza?
A: Hongu, isu achasonera munhu interlayer kuwedzera pakukora vanoratidza mureza, pane 2 dzakasiyana interlayer micheka kuti sarudzo.
Mubvunzo: Mureza unogara kwenguva yakareba sei?
A: Premier furemu ine yakakwira kuita, senge aruminiyamu machubhu, fiberglass uye faibha inosimbisa matanda epurasitiki anoshandiswa. Hupenyu hwemupendero hunotsamira pane kwainoshandiswa. Kazhinji, flagpole ine warandi yemwedzi inokwana mitanhatu.
Mubvunzo: Unorongedza sei mureza wekuratidzira? Zvakadii nehukuru hwesaga?
A: Tichashandisa OPP bhegi uye PVC bhegi remhando dzakasiyana dzekurongedza kuti zvikwane zvaunoda.
Mireza Yekushambadzira Kwebhizinesi
Sail Mireza Kushambadzira
Yakareba Kushambadzira Mireza
Wall Yakakwidzwa Kushambadzira Mireza
Yakakomberedzwa Mucheka Popup Inoratidza
Yakakombama Makakatanwa Fabric Ratidza
Yakatwasuka Jira Popup Inoratidza
Yakatwasuka Tension Fabric Ratidza